Ministirii dhimma-alaa Yunaaytitid Isteets fi Embaasii Ameerikaa Finfinnee jiruun ka qopheessame – wal-tajjiin wal-jijjiirraa muuxannoo, ka dubartoota Afrikaa qonnaa irratti bobba’anii Finfinneetti geggeessamee jira.
Dubartoota Afrikaa hojii qonnaa irratti bobba’an, keessumaa, kanneen toora sanatti hoogganoota ta’an wal-quunnamsiisuu fi akka muuxannoo wal-jijjiiran taasisuutti fuuleffatee geggeessame – jedhamu – kanneen walga’icha qindeessan. Ministirii Dhimma-alaa Yunaayitid Isteets fi Embaasii Ameerikaa Finfinnee jiru tu waliin ta’uun waltajjii kana qopheesse.
Hirmaattonni, hojiiwwan aaraa fi teknooloojii waa-uuminsaa ittiin hojii isaanii fooyyeffatan ilaalchisee akka muuxannoo wal-jijjiiran taasisuunis kaayyoo waltajjichaa akka tahe dubbatamee jira. Neet-woorkii ijaarrachuun wal-quunnamtii isaanii akka itti fufan taasisuun illee kaayyoo waltajjii kanaa ti.
Minhistrii Qonnaa Yunaayitid Isteetsitti, bakka-bu’aan dhimma Itiyoophiyaa fi Gamtaa Afrikaa, Maayikil Fraankoo, Raasiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti, waltajjichi kaayyoo kana caalu akka qabu illee dubbatan.
Kaayyoon tokko, dubartoonni asitti walga’an kun, caasaa walitti-hidhataa yokaan Neetwoorkii uummatan kana itti fufu jennaa abdanna. Kaayyoon xiqqoo kanaa ol deemu immoo, dubaroota kana keessaa hagi tokko, yeroo dheeraa keessatti, toora adda addaatiin, dubartoota ka biroo hojii ka biraa dhaabbatan, kanneen gama qonnaatiin Yunivarsitii gad-dhaabuu jalqabuuudhaan, yokaan qorattota yokaan saayinstistoota ta’uun hojjetaniif fakkeenya ta’uu danda’u, jennee yaadna. Jabaatanii dhaabachuu fi mul’achuudhaan, dubartoota kaaniif fakkeenya gaarii ta’uu malan. Garii amma illee ta’anii jiran. Kun baay’ee barbaachisaa dha, jenna. Hojiin qonnaa, dinagdee biyyattii dhibba irraa harka afurtama qabatee waan jiruuf , biyyattiin oomisha qonnaa fi beekumsa isaa dabaluuf carraa dabalataa dubartoonni itti hirmaachuu danda’an baay’ee ishee barbaachisuuf jira – jedhan.
Kaayyoon waltajjichaa, akka dubartoonni hojii qonnaaatti hirmaatanii fi itti milkaawan jajjabeessuu ta’e iyyu, dhimmi kun qaama mootummaa biyyoota seera baasanii illee akka hawatuu malu hubachiisan – aangawichi Yunaayitid Isteets. Dubartoonni waltajjii har’aa kanatti hirmaatanis, mata-dureelee wal-tajjichi itti fuuleffate kan yeroo isaa waliin deemuu fi barbaachisaa akka tahe dubbatan.
Waltajjii guyyaa tokkoo guutuuf geggeessame kana irratti, ogeeyyiin Ameerikaa deeman, waraqaalee qorannoo dhiheessanii mariin irratti geggeessamee jira – jedha – gabaasaan keenya – Iskindir Firew.
Obbo Baqqalaa Nagaa Mana Keessatti Ugguramuun Ija Seera Biyyattiin Attamitti Ilaalama?
Waldaan Maccaa-Tuulamaa Oromoo Irreecha bara 2016 irratti dhuman kabajuu fi wal dhaba daangaatiin baqatan gargaaruuf Diisiitti sagantaa qopheesse
Haleellaan Laas Veegaas Lubbuu Hedduu Galaafate
Haleellaan Laas Veegaasitti Raawwate Lubuu Hedduu Galaafate